Boriborintany voalohany: noho ny fihibohana, nofoanana ny fisoratam-panambadiana asabotsy | NewsMada
Par Taratra sur 23/04/2021
Nisy ihany ny “fisoratam-panambadiana manokana”, toa izay natao, omaly, tetsy amin’ny Boriborintany voalohany. Noho ny fampiharana ireo fepetra amin’ny fahamehana ara-pahasalamana sy fihibohana noho ny valanaretina Covid-19 izao anefa, voatery nofoanana mihitsy ny fisoratam-panambadiana isaky ny asabotsy.
16 ireo nangataka ny hisora-panambadiana ara-panjakana eo anivon’ny boriborintany voalohany, rahampitso asabotsy. Taorian’ny fanambaran’ny filoha fa miditra amin’ny fihibohana tanteraka ny faritra Analamanga, ny faran’ny herinandro (asabotsy sy alahady), tsy azo tanterahina koa ny fisoratam-panambadiana rehetra, hoy ny délégué au maire ho an’ny boriborintany voalohany, Razafimbelo Arinosy Jacques, omaly. Dimy tamin’ny 16 nisintona ny antontan-taratasiny ka hanemotra ny fotoana hanaovana ny fisoratana. Olon-droa 11 kosa hiroso amin’ny fisoratana manokana anio satria efa vonona izy ireo. Ankoatra ireo hisoratra sy ny vavolombelona roa, 10 ihany ny fianakaviana afaka manatrika mivantana ny fisoratana ao anatin’ny biraom-panjakana. Tsy maintsy arahina koa ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Fito ireo nisora-panambadiana, omaly ary nanaja ny fepetra daholo izy ireo, nisy aza ny latsaky ny 10 ny mpanatrika, hoy ny fanazavany ihany. Tsy hisy ny fisoratam-panambadiana manokana ny zoma 30 avrily fa tsy maintsy tanterahina ny alakamisy 29 avrily ny fisoratana ho an’ireo saika hisafidy ny asabotsy 1 mey.
Mila “ordonnance” avy any amin’ny fitsarana
Afaka manao ny fisoratam-panambadiana mivoaka ny biraon’ny boriborintany ihany ny tomponandraikitra fa mila “ordonnance spéciale” avy any amin’ny fitsarana. Antony manokana toy ny hoe marary tsy afa-mitsangana eo am-pandriana ny iray amin’ny mpisoratra, mitondra vohoka efa ho teraka ilay vehivavy hisoratra, marary efa ho faty ilay lehilahy na ilay vehivavy hisoratra nefa ilaina ny fisoratam-panambadiana hisitrahan’ny iray amin’izy ireo ny zony no ahafahana mangataka ny “ordonnance”. Sarotra ny fahazoana ity karazana taratasy ity ka latsaky ny dimy ny tranga nanaovana izany. Ilaina ny “ordonnance” ialana amin’ny fanaovana hosoka samihafa.
Mifandimby ny mpiasa
Momba ny fanaovana taratasy ara-panjakana samihafa eo anivon’ny boriborintany voalohany, mitohy ny asa fa mifandimby ny tomponandraikitra misahana izany. Mifanampy koa raha misy sampandraharaha be olona manatona tsy hampivezivezy ny olona sy hitarika filaharana lava. Nanamarika ny delegué au maire fa hatramin’ny 30 andro aorian’ny fahaterahan’ny zaza no ahazoana mangataka ny kopia nahaterahana fa tsy 12 andro toy ny teo aloha intsony nanomboka ny taona 2018.